FANAMBARANA: Global Voices Miantso ho amin’ny Fiarovana ny Blaogeran’i Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Mey 2015 3:56 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, বাংলা, Deutsch, Română , Swahili, русский, عربي, English
Ny Global Voices dia miantso ny hifantohan'ny firaisamonina iraisampirenena amin'ny zava-manjò ny mpamaham-bilaogy any Bangladesh. Misy maty voavono ireo bilaogera, ary maro hafa no efa voatafika, iharan'ny fandrahonana ho faty ary hontsokontsonin'ireo mpitarika ara-pivavahana manana fotokevitra henjana noho ny zavatra nosoratany. Tamin'ity taona ity fotsiny, dia bilaogera telo no nisy namono eny imasom-bahoaka.
Ny anaran'ireo mpamaham-bilaogy sy ny hafa nahazo fandrahonana dia hita ao amin'ny lisitry ny olona 84 natolotry ny mpitondra fivavahana silamo mpandala ny nentin-drazana ho an'ny komity manokan'ny governemanta, iampangana ny mpamaham-bilaogy ho “tsy mino ny fisian'Andriamanitra” sy nanoratra manohitra ny finoana silamo. Namaly tamin'ny fanakanana ireo tranonkala mpitsikera sy ny fisamborana ireo mpamaham-bilaogy sy mpitari-pivavahana mitandro ny marina, nandritra ny fotoana nampamaivay ny hetsika #shahbag tamin'ny 2013 ny governemanta. Misy ireo seha-baovao malaza sasantsasany, anisan'izany ireo blaogy avy amin'ny elatra havanana, nampiely ny hevitra fa ny blaogera rehetra no tsy mino an'Andriamanitra “manohintohina ny fahatsapana” ara-pivavahan'ny Bangladeshis.
Tsy misolovava na manao izany herisetra izany ireo blaogera ireo. Nanoratra ny fahasarotana sy ny fitongilanana ara-politika misy matetika ao Bangladesh ry zareo ary ny mahazavadehibe ny fanandratana ny zon'olombelona. Nampihatra ny fahalalahany maneho hevitra ry zareo, izay asandratry ny lalampanorenan'ny firenena sy ny fampianaran'ny zon'olombelona iraisampirenena izay mahampikambana an'i Bangladesh.
Global Voices dia fikambanan'ny blaogera, mpikatroka, mpanoratra, ary mpandikatenin-dahatsoratra avy amin'ny firenena 137. Fototry ny iraka ampanaovina anay ny zon'olombelona manerantany hiteny malalaka. Miteny ireo tantara tsy tsara tatitra avy amin'ny vazantany efatry ny planeta izahay ary miaro ny zon'ny rehetra hiresaka malalaka tsy misy tahotra.